असहज अवतरण (भाग–४)
‘एउटा कुरा थाहा छ सुनिला ?’ प्रविनले स्यानो स्वरमा ठूलो कुरा थाहा पाएजसरी सोध्यो ।
‘के कुरा ? भन न ।’
‘शिव सरलाई त तिम्रो साइँलौले मार्न लगाएको रे नि’
खङ्ग्रङ्ग भए । घाँस काट्दाकाट्दैको मुठी खुस्कियो । पत्यार लागेन ।
‘होइन होला, तिम्लाई कस्ले भनेको ?’
‘बाआमाले कुरा गरेको सुनेको ।’
दिमागमा एकैचोटी शिव सर र साइँलौको अनुहार मिसिएर आयो । जसरी शिव सरलाई माओवादीले मारेको दृश्य देखेर पनि पत्याउँन कठिन भएको थियो, त्यस्तै कठिन भयो साइलौले मार्न लगाएको भन्ने कुरा पत्याउँन ।
‘किन मारेको रे त ?’
‘शिव सर र साइँलौको झगडा परेको थियो रे । एकदिन साइँलौले ‘तँलाई नमारी छाड्निँ’ पनि भनेका थिए रे । अस्ति गाउँमा सेना आएको थियो नि, त्यो शिव सरले गाउँमा बोलाएको भनेर साइँलौले माओवादीलाई कुरा लगाइदिएको रे । अनि, सुराकी गर्यो भनेर माओवादीले मारेको रे ।’
प्रविनको कुरा सुनेपछि अलि बढी पत्यार लाग्यो । तर आफूलाई सम्हालिन नै कठिन भयो । घाँस काट्ने जाँघर मर्यो । म टोल्हाएको देखेपछि प्रविनले सोध्यो, ‘के भयो सुनिला, किन टोल्हाएको ?’
‘मलाई घाँस काट्न मन लागेन, घर जाऔं’
‘आधा ढोको मात्रै घाँस बोकेर घर जाने ? बाटोमा देख्नेले के भन्लान् ? अनि आमाले गाली गर्दिनन् ?’
‘जसले जे भने पनि भनोस्, मलाई त घाँस काट्न मन नै छैन ।’
‘त्यसो भए तिमी यहाँ बस्दै गर, म घाँस काटिदिन्छु ।’
साँझ पर्न लागिसकेको थियो । प्रविन एक्लैले दुई डोका घाँस काट्दा घर पुग्न रात पर्ने खतरा थियो । तै पनि मैले मनमनै उसको प्रस्तावलाई स्वीकारेँ ।
प्रविनलाई थाहा थियो– मलाई सबैभन्दा मन पर्ने शिव सर नै हुनुहन्थ्यो । शिव सरले पनि मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको हत्याले सबैभन्दा बढी विक्षिप्त विद्यार्थी म नै थिएँ ।
शिव सरको हत्यापछि मेरो मुहारमा कुनै दिन उल्लेख्य खुसी छैन । उसले बेलाबेलामा ‘चिन्ता नलेऊ, धेरै नसम्झ’ भनेर सम्झाउँथ्यो । तर म सक्दिनथेँ । अझ साइलौले मार्न लगाएको कुराले झन् बेस्मारी प्रहार गरेको कुरा प्रविनले बुझ्यो ।
हो, प्रविनले मेरो धेरै कुरा बुझ्थ्यो । धेरै माया गथ्र्यो ।
मेरो दिमाग र आँखामा कहिल्यै नटुट्ला जस्तरी साइलौ र शिव सरको अनुहार मिसिएर आइरह्यो । एउटा प्रश्न खेलिरह्यो, ‘साइलौले किन मार्न लगाए शिव सरलाई ?’
साइलौ गाउँमा बिग्रेको मान्छेमध्येको एक नम्बरमा गनिन्छन् । कसैले बिग्रेको मान्छेको उदाहरण दिनुपर्यो भने साइलौं कै नाम लिन्छन् । कहिल्यै दिल लगाएर काम गरेको देखेको छैनँ । बिहान चियापसलमा हावादारी गफ लगाउँनु, दिनभरी तास खेल्नु, साँझ रक्सीले मातिएर घर जानु, घर गएर साइलीआमालाई गाली गर्नु उनको नियमित दैनिकी जस्तै थियो ।
बैंकको पैसा तिर्नु पर्दैन, बिजुलीको पैसा तिर्नु पर्दैन भनेर गाउँलेलाई गफ दिँदै हिँड्थे । उनको कुरालाई कसैले पत्याउँदैनथे, ओठ लेब्य्रयाउँथे, राम्रो मान्दैनथे । तर पनि उनी गफ दिन छाड्दैनथे ।
एक महिनाजति अघि साइलौ र शिव सरको भनाभन भएको मैले पनि सुनेको हो । दसैं मान्न शिव सरसँग साइलौले ऋण लिएका रहेछन् । शिव सरले पैसा मागेपछि ‘धनी भएर गरीबलाई हेपेको’ भन्दै तथानाम गाली गरे ।
‘सामन्तीलाई कसरी ठेगान लगाउँनु पर्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छ’ भनेर साइलौं एकोहोरो कड्किए । शिव सर केही बोल्नु भएन । मलाई त्यतिबेला साइलौसँग खुब रिस उठेको थियो । त्योभन्दा बढी रिस उनले सरलाई मार्न लगाएको थाहा पाएपछि उठ्यो ।
आजसम्म साइलौंले सुकिलो लुगा लगाएको देखेको छैन । दाह्रीजुँगा काटेर चिटिक्क परेको देखेको छैन । जिउ लिखुरे भए पनि कुरा कहिल्यै सानो गरेको सुनेको छैन ।
त्यो अनुहारमा भित्रैदेखि खुसी छाएको देखेको छैन । तास जित्दा भएको खुसीमा पनि खासै दम देख्दिनँ । साइलौंको अनुहार सम्झनेबित्तिकै कन्चट नै फुट्लाजस्तो हुन थाल्यो । सँगै साइलीआमाको अनुहार याद आयो ।
साइलीआमाले मलाई औधी माया गर्नुहुन्थ्यो । उहाँहरुको सन्तान हुन सकेको थिएन । उहाँले मलाई आफ्नै छोरीजस्तरी माया गर्नुहुन्थ्यो । घाइरोघुइरो सुनेअनुसार साइलीआमाकै कारण सन्तान नभएको रे ! त्यहीं निहूँमा ‘एउटा बच्चा पनि जन्माउँन नसक्ने आइमाई’ भनेर साइलौंले धेरै पटक कुटेका छन् । साइलीआमा घरमा बस्नै नसक्ने भएर धेरै पटक माइत जानुभो, फर्कनु भो ।
साइलीआमाले दुखको पोको फुकाउने हाम्रै घरमा आएर हो । प्रायः साँझ आउनुहुन्छ, रुनु हुन्छ, जानुहुन्छ । त्यहीं निहूँमा ‘घरको कुरा गाउँलेसँग गरी’ भनेर पिटेको सुनेको छु । गाउँलेले दया गर्दै भन्छन्, ‘बिचरी साइलीले सारै दुःख पाई, कस्तोसँग फसी ।’
चिन्तैचिन्ताले साइलीकाकीको जिउ पनि सुकेर सिठ्ठो भइसकेको छ । वर्षौदेखि कुनै रोगले भित्रभित्रै खाइरहे जस्तो । साइलौंको व्यबहारले चुसेजस्तो । अभावले गिजोलेर फालेजस्तो ।
त्यसैले पनि होला, मलाई पनि साइलीकाकीको खुब माया लाग्थ्यो । अझ साइलौंले नै शिव सरलाई मार्न लगाएको सुनेपछि त झन् साइँलौप्रतिको आक्रोश र साइँलीकाकीप्रतिको सद्भाव उर्लिएर आयो ।
धेरैबेर टोल्हाएछु । छेवैमा आएर प्रविनले बोलाएपछि झस्किएँ ।
‘किन टोल्हाएकी सुनिला ? डोको भरियो, घर जाऔं । रात पर्न लागिसक्यो ।’
मैले ‘हुन्छ’ भावले टाउको हल्लाएँ ।
प्रविनले जतनका साथ घाँसको भारी घचेडिदियो । उसले आफैं भारी बोक्यो ।
‘तिमीजस्तो ट्यालेन्ट केटीले यसरी चिन्ता लिएर वस्नु हुँदैन । जे नहुनु भैहाल्यो, अब आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ ।’
‘त्यो त हो, तर मलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ प्रविन ।’
‘गाह्रो त मलाई पनि भएको छ ।’
‘शिव सरलाई मारेको भन्दा पनि किन मार्न लगाएको भन्ने कुराले झन् चिन्ता भयो ।’
‘तिम्रो साइँलौ त्यस्तै छन्, न आफू सुखी हुने भए, न साईलीकाकीलाई खुसी दिए, न गाउँलेलाई नै खुसी हुन दिए । कस्तो पापी भएर निस्के ।’ प्रविनले भन्यो ।
मैले कुनै प्रतिकृया जनाइनँ ।
साँच्चै पापी रहेछन् साइलौं । अब गाउँका कोको मान्छेलाई सुराकी गर्यो भन्ने कुरा लगाएर मार्न लगाउँने हुन् । देशैभरी द्वन्द्व हुँदा पनि शान्त भएको हाम्रो गाउँमा साइलौकै कारण नराम्रो हुने भयो ।
यो आमगाउँलेको साझा चिन्ता थियो । तै पनि म केही बोलिनँ । साइलौको नराम्रो हुनुसँग साइँलीआमा जीवन जोडिन्थ्यो । त्यसैले पनि कुनै कुभलो चिताउन सकिनँ ।
सोचें, ‘कसैले रिसको झोकमा साइलौं माओवादी हुन् भनेर सेनालाई कुरा लगाइदियो भने !’
यो कल्पनाले झन् झस्किएँ । साइलौं मरेपछि साइँलीकाकी विधवा हुनेछिन् । विधवा हुनु भनेको थोरै बाँचेर धेरै मरिसक्नु हो । किनकि, हाम्रो समाजमा नारीलाई तल्लो दर्जाको प्राणीका रुपमा लिइन्छ ।
नारीलाई हेपेको देखेर पनि मलाई माओवादीले गरेको ‘क्रान्ति’ सहीजस्तो लागेको थियो । तर, जब मेरो प्रिय शिव सरलाई मा¥यो, तब माओवादीलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोणमै परिवर्तन आयो ।
घर पुग्दा साँझ छिप्पिसकेको थियो । घर ढिला आएको भनेर आमाले गाली गर्नुभयो ।
‘काल–बेला राम्रो छैन । अब कहिल्यै घर आउँदा साँझ नपार्नू ।’ आमाले सम्झाउँनु भयो । मैले तत्काल कुनै प्रतिकृया जनाइनँ ।
बा मझेरीमा बसेर मकै केलाउँदै हुनुहन्थ्यो । आमा अँगेनुमा तरकारी पकाउँदै । म पनि आमाको छेवैमा गएर टुसुक्क बसेँ ।
‘तँलाई अचेल के भएको छ छोरी ? किन निन्याउँरी भएकी ?’ अँगेनुमा दाउरा मिलाउँदै आमाले सोध्नुभयो ।
‘केइ भएको छैन ।’
‘गाउँमा पनि अचेल तेरै कुरा हुन थालेको छ । शिव मास्टर मारेदेखि तँ एकोहोरी भएकी छस् रे । स्कुलमा पनि बोल्दिनस् रे । घरमा पनि पहिला भन्दा बेग्लै भएकी छेस् ।’ बाले भन्नुभो ।
‘तैले चिन्ता मानेर के हुन्छ ? जताततै यस्तै छ । चिन्ता गरेर पढाई नबिगार् छोरी । हाम्रो सपना भनेकै तै हो । हामी तँ दुखी भएको हेर्न सक्दैनौं ।’ आमाले थप्नु भो ।
म चुपचाप नै वसेँ ।
धेरैबेरसम्म सम्झाउँनु भो, बाआमाले । सायद उहाँहरुकै योजना नै थियो । मलाई पनि थाहा थियो, ‘बाआमाको सपना मै हूँ । मैले पढेर केही गर्नु पर्छ । बाआलाई सुख र खुसी दिनु पर्छ । मेरो दाजुभाई नभए पनि मैले बाआमालाई दाजुभाई भएजत्तिकै सुख दिनु छ । छोरी पनि छोरा मान्छेभन्दा कम हुँदैनन् भनेर देखाउनु छ ।’
छोरा हुनेहरुका बाआमालाईभन्दा मैले मेरा बाआमालाई सुखी र खुसी राख्ने सपना देखेको थिएँ । म पनि बाआमा गम्भीर भएको हेर्न सक्दिनथेँ । उहाँहरुलाई पिर परेको सहन सक्दिनथेँ । तर परिस्थितिले मलाई अलि बेग्लै बनाएकै थियो ।
म धेरैबेर चुप बस्नु भनेको बाआमालाई झन् चिन्ता दिनु हो भन्ने सोचेर बोलेँ, ‘मलाई खास केई भएको छैन । तपाईंहरुले चिन्ता लिनु पर्दैन । म पनि तपाईंकै सुख र खुसीको बारेमा सोचिरहेको छु । धेरै पढेर, जागिर खाएर छोरा हुनेहरुले भन्दा पनि बाआमालाई सुख दिन्छु ।’
आमाको अनुहारमा अलिकति चमक देखेँ । बेग्लै चमक ।
‘तिउन पाकेन ? भात खाऔँ न बरु, आफूलाई कस्तो भोक लाग्या छ ।’ मैले भने ।
‘पाक्यो । लौ अब हजुरले पनि हात धुनुस् ।’ आमाले बालाई भन्नु भो ।
भात खाँदै गर्दा मैले भने, ‘शिव सरलाई त हाम्रो साइँलौले मार्न लगाएको रे नि !’
बाआमा दुबैले सशंकीत आँखाले मलाई हेर्नु भो । अनि उहाँहरुले आँखा जुधाउनु भयो । मानौं, उहाँहरुलाई यो कुरा पहिल्यै थाहा थियो । मैले कसरी थाहा पाएँ भन्नेमा उहाँहरुको चिन्तामिश्रित शंका थियो ।
‘कस्ले भनेको तँलाई ?’ बाले सोध्नुभो ।
‘उसलाई कसले भनेको रे ?’
‘बाआमाले गरेको कुरा सुनेको रे ।’
एकैछिन बाआमा चुप लाग्नु भो । मैले त्यो कुरा थाहा नपाउनुपर्ने कुरा थाहा पाएजस्तो गर्नुभो । एकछिनपछि बाले भन्नु भो, ‘त्यसमा हाम्लाई कुनै मतलब छैन । त्यसै त हामीलाई सत्रु भन्दै हिँड्छ । बुहारीलाई हामीले उचालेको भन्छ । यस्ता कुरा सुने पनि नसुनेजस्तो गर्नु पर्छ ।’
‘गाउँमा जे कुरा चले पनि चलोस् । तैले पनि नसुनेजस्तो गर् ।’ बाको कुरामा आमाले सही थप्नु भो ।
लाग्यो, ‘बाआमा दुवैले यो कुरा पहिल्यै सुनिसक्नु भएको रहेछ । तै पनि मलाई किन नभन्नु भएको होला ? मैले थाहा पाएर झन् चिन्ता मान्छे भनेर होला ।’
खाना खाएर सकिन लागेको थियो । साइँलीकाकी हस्याङफस्याङ गर्दै हाम्रो घरभित्र छिर्नुभो । ढोका छेवैको पिर्कामाथि बसेर सुँक्कसुँक्क रुन थालेपछि आमाले सोध्नुभो, ‘के भो साइँली ?
काकी झन् बेस्मारी रुन थाल्नु भो । पच्छ्यौराको फेरले आँसु पुछ्दै भन्नुभो, ‘आज पनि धोकेर आउनु भएछ । खान्की पाकेको रहेनछ भनेर कुट्नु भो । ‘यसलाई नमारी छाड्निँ’ भनेर खुर्पा उज्याउँनु भयो ।...’ बोल्दाबोल्दै काकीको गला अवरुद्ध भयो । एक पटक हिक्क गर्नु भो । अनि, डाँको छाडेर रुन थाल्नुभो ।
आमाले उठेर काकीलाई सम्झाउनु भो, ‘नरोउ साइँली, आज यतै बस । अलिकति भात उब्रेको छ, यहीं खाऊ, नपुगे पकाउँछु । तिम्ले यो जुनीमा सुख नपाउने भयौं ।’
घुँक्कघुँक्क गर्दै साइँलीकाकीले भन्नु भो, ‘अहिले मलाई सत्रुकोमा गएर रोई भनेर यहीं आएर मार्छन् ।’
‘त्यो मुर्दारले न घरमा सुख दियो, न दाजुभाइलाई, न गाउँलेलाई । किन मर्नु पनि पर्दैन जस्तो गर्छ त्यो ।’ बाले कड्किदैँ भन्नुभो, ‘आज त्यसलाई म राम्ररी सम्झाउँछु, मानेन भने केही गर्नु पर्ला ।’
काकीले आमालाई रुँदै पीडा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । ‘दिनभरी आफूलाई सास फेर्ने फुर्सद छैन । राति आएर कुट्नुहुन्छ । घरमा खान पुग्दैन, दिनभरी तास खेलेर हिँड्नुहुन्छ । म त यहाँ बस्न नसक्ने भएँ दिदी । कस्तो घरमा परेछु । कस्तो नालायकलाई दिएछन् बाआमाले । माइतीले पनि पन्छाउँन मात्रै खोजेछन् । अहिले माईतीले पनि राख्दैनन् । म के गरुँ दिदी ? म त अब बाँच्दिनँ । बाँच्ने मनै मरेर आयो । दिनहूँ अलिअलि गरेर मर्नुभन्दा पुक्लुक्क खुस्किनँ पाए सन्चो हुने थियो ।’
साइँलाकाका बाहिर आइसकेका रहेछन् । काकीको कुरा सुनेर उहाँ उग्र हुनुभो ।
‘एउटा सन्तान ब्याउन नसक्नी बाँझीले बाँचेर पनि के काम ? सत्रुको घरमा आएर लोग्नेको कुरा काट्ने तँजस्तो आइमाई मर्नु पर्दैन, बाहिर त निस्की, मै मार्दिन्छु....’
मेरो मुटुले ठाउँ छाड्यो । मातेको साइलौंले आज के गर्ने हुन् ! यसो झ्यालबाट चियाएर हेरेँ । साइलौको हातमा खुकुरी थियो । झन् सातो उड्यो ।
साइलौंलाई सम्झाउँछु भनेर बा बाहिर निस्कन लाग्नुभो । आमाले साइँलीकाकीलाई समाएर राख्नु भो । साइलाकाका भन्दै थिए, ‘बाहिर निस्कन्छेस् कि भित्रै आएर मार्दिऊ ?
बाहिर निस्कनेवित्तिकै बाले ‘ऐया....’ भन्नुभो ।
‘बा के भो ?’ भन्दै आत्तिएर म बाहिर निस्किएँ ।
उपन्यास ‘असहज अवतरण’ भाग–३ः जब शिव सरको हत्या भयो
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ ७, २०७६, ०५:११:००
वीरेन्द्र जोहारीको नयाँ गीत ‘मुई डोली’
बक्स अफिसमा तानाजीको अनपेक्षित वर्चश्व